Tetikasam-pahombiazana amin'ny tranonkala fampahafantarana voatonona amin'ny Semalt
Tonga amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny fikambanana rehetra manankery izany. Mampalahelo fa tsy nampiasaina tanteraka ny teknika noho ny olana sasany. Mazava ho azy, azonao atao ny manao fikarohana an-tserasera mba hahazoana ny votoaty tianao, ary azonao atao kopia izany. Na izany aza, dia azo atao izany raha kely ny angon-drakitra. Tsy maintsy mitaky fitaovana enti-manamboatra tranonkala ianao mba hamokarana betsaka ny angon-drakitra. Ny fanamby lehibe indrindra eto dia ny fepetra takian'ny programming traikefa.
Mila manana traikefa sy fahalalana ilaina amin'ny programa ianao mba hahafahanao mametraka ny fitaovana maoderina amin'ny ankapobeny . Vitsy ihany anefa no manana traikefa amin'ny programa. Ankoatr'izany, ny fitaovana fandinganana tranonkala dia maivana sy mandany fotoana be ho an'ny mpandrindra malaza efa za-draharaha. Mba hanatsarana ny zava-misy, mety mila manova ny kaodin'ny rindrambaiko ho an'ny tranonkala voatokana ianao satria ny tranonkala dia miavaka. Izany no mahatonga ity fitaovam-piserasan-tranonkala vaovao ity haka izao tontolo izao amin'ny oram-baratra. Tsy mitaky fahalalàna programa izany, ary mahomby. Ny anaran'ilay fitaovana dia OutWit Hub
OutWit Hub dia tafiditra fanampiny amin'ny Firefox izay azo alaina sy apetraka ao amin'ny navigateur. Amin'ny alalan'ny rindrambaiko, dia hanodina tranokala samihafa ianao miaraka aminà klika vitsy monja amin'ny totozy. Na dia manana fahafahana hanaparitaka karazana habaka amin'ny tranokala hafa aza ny programa dia azonao atao koa ny mampifanaraka izany araka izay ilainao.
Toy izao ny fampiasana ny programa
Mila maka azy amin'ny tranokala fanampiny ao amin'ny Mozilla ianao ary mametraka ao amin'ny navigateur Firefox anao. Aorian'ny fametrahana azy dia tsy hanan-kery ny fanampiana raha tsy manomboka ny browser ianao. Hahita safidy tsotra kely amin'ny sisin'ny rindrina ianao. Na dia tena manan-danja aza ireo safidy ireo, dia ampy ho anao ny mamolavola sary sy hafatra takiana amin'ny pejy web na ny rohy ao amin'ny pejy.
Na dia izany aza, ireo safidy fototra dia tsy afaka manatontosa asa fitadiavana vahaolana haingana. Raha mila safidy fanampiny ianao, mila mankany amin'ny Automotors, ary avy eo dia mifindra amin'ny sehatra Scrapers. Ny pejin-doharin'ny tranonkala kinanao dia hiseho eto. Ny dingana manaraka dia ny mikaroka ireo toetra voatahiry ao amin'ny code. Azo ampiasaina ho marika amin'ny singa entina ilainao izy ireo alohan'ny handraisana azy.
Ankehitriny, tokony hameno ny sarisary "Marker aloha" sy ny "Marker after", ary kitiho ny bokotra. Aorian'izay dia mila mipetraka fotsiny ianao ary mijery ny asan'ny OutWit Hub. Ity programa ity dia manome fahafahana anao hampiasa maratra maro samihafa amin'ny fotoana iray, ka hanatsara ny fotoana fiverenana.
Fitsipika ankapobeny ho an'ny fanangonana rakitra. Ny fizarana amin'ny takelaka fanampiny dia misy lesona samihafa momba ny fangatahana / fangatahana samihafa. Hahita haingana kokoa sy mora kokoa ianao rehefa manapaka azy ireo. Noho izany dia azo atao ny mianatra ny fianarana ara-pivavahana.
Ny OutWit Hub dia manana ny fahafahana mitana ny sarintsarim-panafody mahatalanjona miaraka amin'ireo asa maro samihafa. Noho izany, mety mila azonao ny fampiasana ny asa rehetra. Ohatra, ny fanangonana ny angona avy amin'ny tranonkala marobe izay manana rafitra mitovy, mila ny asa antsoina hoe "Column Format".
Ho famintinana, OutWit Hub dia teboka lehibe mitabataba fanampiana ho an'ireo programa sy programa tsy mpamorona. Manana andraikitra maro tokony hianaranao koa izy io. Ireo fepetra saro-takarina kokoa ampiasainao, ny haingana kokoa sy tsaratsara kokoa, ny valin'ny fanalana ny tranonkala ho anao Source .